Geeska Afrika ayaa inta badan laga cunaa maandooriyaha qaadka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ciidammada xuduuddaha oo gacanta ku dhigay qaad. sawir: TULLVERKET
Maan-dooriyaha qaadka oo noociisu is-bedelay
La daabacay torsdag 16 februari 2017 kl 16.48
Labadii sannadood ee ugu dambeeyey ayuu aad kor ugu kacay tirada qaadka qalalan ee ciidammada xuduuduhu gacanta ku dhigaan, midkaasina oo qiyaastii laba jibbaarmay, sida uu sheegay Johan Arvidsson Vemmert, ahna madaxa laanta saadaalinta iyo war-doonka Malmö.
- Qaadka qalalan ee gacanta lagu dhigo ayaa kor u kacay illaa iyo 1.2 tan oo u dhiganta 1 200 oo kiilo sannadihii 2014-2016. Halka uu dhanka kale hoos aad ugu dhacay 8 000 oo kiilo qaadka qoyan ee ciidammada xuduuduhu gacanta ku dhigaan snnadkiiba wixii laga soo bilaabo sannadkii 2014, sida uu sheegay Johan Davidssin Vemmert.
Wixii ka dambeeyey sannadihii 2012 iyo 2014 oo waddammada Holand iyo boqortooyada Ingiriiska laga xaarantimeeyey caleenta muqaadaraadka qaadka ayay hoos u dhacday tiradii maan-dooriyaha qaadka ee dhuumaaleeysiga dalkan lagu soo gelin jirey, waa marka uu cusub yahay. Halka dhanka kale uu kor u kacay 1 200 kiilo isla-maandooriyaha, isaga oo la soo qalajiyey.
Waddammada Holand iyo boqortooyada Ingiriiska ayaa albaab u ahaan jirey in si sahlan dhuumaaleeysi loogu soo waarido maandooriyaha qaadka waddammada dhaca waqooyiga Yurub oo dalkan Sweden uu ka mid yahay. Hase yeeshee wixii mamnuuciddooda ka dambeeyay ay adkaatay sidii maan-dooriyaha qaadka loogu soo gaarsiin lahaa Sweden, maadaama uu u baahan yahay in si degdeg ah loo soo gaarsiiyo inta aannu qalalin.
Inkasta oo uu hoos u dhacay kontarabaanka maandooriyaha qaadka cusub ayuu haddana Johan Davidsson Vemmert wuxuu mustaqbalka aamin-san yahay inuu kor u sii kici doono isku dayga kontarabaanka maandooriyaha qaadka ee qalalan haddii ay dalka ku soo bataan dadyoow ka soo jeeda waddammada dhaca geeska Afrika oo maan-dooriyahan laga isticmaalo inta badan.
- Inta badan waxaa muqaadaraadkan isticmaala rag ka soo jeeda geeska Afrika. Haddii ey qowmiyaddahaasi dalkan ku soo bataan. Waxaannu qiyaaseynaa in maan-dooriyaha qaadka dalkan loo soo waarido uu kor u kici doono, sida uu sheegay Johan Arvidsson Vemmert, madaxa laanta saadaalinta iyo war-doonka ee magaalada Malmö.